Kal-fadhigii 6aad Ee Golaha Xildhibaanada Degmada Mustaxiil - Cakaara News
Kal-fadhigii 6aad Ee Golaha Xildhibaanada Degmada Mustaxiil
Mustaxiil(Cakaaranews)Sabti 25ka june 2016.Waxaa maanta si heer sare ah u qabsoomay kalfadhigii 6aad ee golaha xildhibaanada degmada mustaxiil kaasoo baarlamaanka loogu soo bandhigay warbixinta waxqabadkii sanad miisaaniyadeedka 2008 T.I.
Kalfadhigan ayaa waxaa ugu horayn furitaankii kahadlay kusimaha afhayeenka golaha xildhibaanada degmada mustaxiil ahna afahayneen kuxigeenka degmada mudane cabdiqaadir muxumed xuseen oo sheegay in kal-fadhigani yahay mid golaha xildhibaanada loogu soo bandhigayo warbixintii waxqabadka degamad ee sanad miisaaniyadeedka 2008 TI.
Sidookale waxaa iyana kahadlay kusimaha gudoomiyaha ahna madaxa xafiiska caafimaadka degmada mustaxiil mudane cabdiraxmaan muxumed daahir iyo waliba madaa xafiiska maaliyada degmada mustaxill mudane cabdixakiin cabdulaahi xaaji oo sheegay in kal-fadigan yahay kalfadhigii 6aad kaasoo baarlamaanka loogu soojeedinayo waxqabadkii sanadka iyadoo baarlamaanka loo soo bandhigay warbixintii oo ah physicaly iyo financially labadaba. Waxayna intaakudareen masuuliyiintu in sidookale lasoo bandhigay qorshayaashii qorshaysnaa waxii qabsoomay iyo waxa aan qabsoomin iyo sababta ayna u qabsoomin.
Ugudanbayna xubnihii baarlamaanka oo si balaadhan uga dooday islamarkaana usoo jeediyay maamulka talobixino ku aadan dhinacyada horumarka iyo maamulka suuban. sidookalana u riyaaqay sida cad cadaanta leh ee loo soo bandhigay waxqabadkii iyo miisaaniyadii labadaba.